संसारकै दु र्लभ अ वस्था !!! युवतीको मु टुको ध ड्कन देखिन्छ शरिर वाहिर । – Khabar 27 Media
संसारकै दु र्लभ अ वस्था !!! युवतीको मु टुको ध ड्कन देखिन्छ शरिर वाहिर ।
January 16, 2021 January 16, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on संसारकै दु र्लभ अ वस्था !!! युवतीको मु टुको ध ड्कन देखिन्छ शरिर वाहिर ।
सवैको सपनाको शहर हो अमेरिका जो पनि उतै वस्न चाहन्छन् उतै आफ्नो सन्तान जन्माउन चाहन्छन् । तर अमेरिकामै वसेकी एक युवती सँसारमै नभएको दुर्लभ समस्यासँग जुधी रहेकीछिन् । विर्षभिया गोन्चारोवा नाम गरेकी यि युवतीको पेंंटालाजी अफ कान्ट्रेल नामको कंडिसन छ । गर्भमा हुँदा नै उनको पेटको माँशपेशिको गलत तरिकावाट डेभ्लप हुन गएको हो । गोन्चारोवाको आफ्नो यो कंडिशनवाट उनलाई कुनै दुखाईको महशुस नभएपनि मुटू धड्किएको वाहिरवाटै देखिन्छ ।
यो वाहेक उनको मुटुमा प्वाल पनि छ । यहि कारणले सधैं उनले अस्पतालमा नै समय विताउन परेको छ । सन् २०२० को शुरुमा नै उनको अक्सिजन लेवल धेरै घटेकोले २ हप्तासम्म इमरजेन्सी रुममा वस्नु परेको थियो । त्यस पछि मात्र उनको अक्सिजन लेवल सामान्य भएको थियो ।
उनकी आमाले २०१५ मै अमेरिका जाने फैसला गरेकि थिईन किनकी त्यहाँ आफ्नी छोरीको उपचार गर्न सम्भव थियो । आफ्नो छारीको मुटुको प्वाल वन्द गर्न सकिए उनि सामान्य लाईफ जिउन सकिन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । गोन्चारोवाको हाईव्लड प्रेशर भएको कारण फोक्सोको नशामा पनि असर परिरहेको थियो र अपरेशन गर्ने सम्भव भईरहेको थिएन ।
गोन्चारोवा भन्छिन् कहिलेकाही उनको अक्सिजन लेवल धेरै कम हुन्छ र चक्कर आउछ । तैपनि उनलाई सधैं एक्टिभ रहनु मन लाग्छ र आफ्नो साथीहरुसँग डांस गर्ने गीत गाउन मन लाग्छ । तर अहिले कोरोना माहामारीको कारण आफ्नो साथिहरुसँग ज्यादा समय विताउन पाएकि छैनन् ।
गोन्चारोवा सोशल मिडियामा पनि ज्यादै एक्टिभ रहन्छिन् । आफ्नो आमाको साथको फोटोहरु शेयर गरिरहन्छिन् । आफ्नो इन्स्टाग्राममा सवैवाट धेरै नै पोजेटिभ मेशेज पनि प्राप्त गर्छिन् यो पढेर उनि ज्यादै खुशी हुन्छिन् । उनि आफु अरु भन्दा धेरै नै अलग जस्तो देखिए पनि यो ज्यादै दुर्लभ र अनौठो भएकोले आफुलाई मन परेको वताईन् ।
March 8, 2021 March 8, 2021 Shyam Lama
सुतिरहेकी थिइन् महिला, उठ्दा त छिरी सकेको रहेछ, तुरुन्तै अस्पताल पुर्याएर हेर्दा त ४ फिटको सर्प भित्र छिरेर घाँटीबाट तलसम्मै पुगिसकेकेा थियो ।
January 11, 2021 July 2, 2021 Shyam Lama